Isika olombelona sy Andriamanitra
"1 Dia namaly Joba ka nanao hoe: 2 Fantatro tokoa fa izany no izy; Fa aiza no hahamarina ny zanak’olombelona eo anatrehan’Andriamanitra? 3 Raha te-hifandahatra aminy izy, dia tsy mahavaly teny Azy na dia iray amin’ ny arivo aza. 4 Hendry am-po Izy sady matanjaka amin’ny hery; iza no nikiry nanohitra Azy ka tsy naninona? 5 Izay mamindra tendrombohitra, nefa ireny tsy mahalala akory, izay mamadika azy amin’ny fahatezerany, 6 Ary mampihorohoro ny tany ho afaka amin’ ny fitoerany, ka mihozongozona ny andriny; 7 Mandidy ny masoandro Izy, ka tsy miposaka iny, ary manisy tombo-kase manafina ny kintana; 8 Sady Izy irery ihany no mamelatra ny lanitra sy mandia ny onjan-dranomasina; 9 Manao ireo kintana lehibe Izy, dia ny Bera sy ny Telonohorefy ary ny Ikotokelimiadilaona sy ireo kintana maro any atsimo, 10 Ary manao zava-dehibe tsy takatry ny saina, eny, fahagagana tsy hita isa. 11 Indro, mandalo ahy Izy, nefa tsy hitako; Ary mihelina Izy, nefa tsy fantatro. 12 Indro, mipaoka Izy, ka iza no mahasakana Azy? Iza no hanao aminy hoe: Inona no ataonao? 13 Andriamanitra tsy mampitony ny fahatezerany; Ny mpanampy an-dRahaba aza dia mitanondrika eo ambaniny. 14 Mainka fa izaho tsy mahavaly Azy, na mahafidy teny hifandaharako aminy; 15 Fa na dia marina aza aho, dia tsy hahavaly tsy akory; Hifona amin’Ilay manana ady amiko no hany heriko. 16 Raha mba niantso aho, ka namaly ahy aza Izy, dia tsy ho nino aho fa hanaiky ny fitarainako Izy. 17 Fa manorotoro ahy amin’ny tafio-drivotra Izy ka manamaro ny feriko tsy ahoan-tsy ahoana. 18 Sady tsy avelany haka aina akory aho, fa vokisany zava-mangidy. 19 Raha ny amin’ny herin’ny mahery, dia: Indro ary! Ary ny amin’ ny fitsarana: Iza no hifandahatra amiko? 20 Na dia marina aza aho, dia hanameloka ahy ihany ny vavako; Ary na dia tsy manan-tsiny aza aho, dia hanao ahy ho meloka Izy. 21 Marina aho, ataoko tsinontsinona ny aiko; Tsy ahoako izay ho velona. 22 Tsy misy hafa aminy, ka izany no nanaovako hoe: Ny marina sy ny meloka dia samy aringany avokoa. 23 Raha misy loza mahafaty tampoka, dia mihomehy ny fizahan-toetra ny marina Izy. 24 Ny tany efa voatolotra ho eo an-tànan’ny ratsy fanahy; Manarona ny tavan’ny mpitsara eo Izy; Raha tsy Izy no manao izany, dia iza kosa ary?" Joba 9:1-24
Mahery Andriamanitra(1-10). Izay no mandresy lahatra an’i Joba. Manam-pahefana amin’ny zavatra tsy hitantsika maso. Lehibe lavitra noho ny an’ny olombelona ny heriny sy ny fahalalany. Azonao ianarana tsianjery ny and.1-10 hampiasaina rehefa manao fiderana an’Andriamanitra raha tena mitovy amin’ny an’i Joba ny faharesendahatrao.
Tsy hita, tsy fantatra. Marina tokoa fa tsy mahita an’Andriamanitra izany mihitsy ny olombelona; Ny Baiboly anefa no mampahafantatra antsika ny momba Azy, ny fikasany ho an’izao tontolo izao. Jesosy Kristy no endrik’Andriamanitra tsy hita (Kolosianina 1:15). Izay nahita Azy dia nahita ny Ray hoy ihany Jesosy (Jaona 14:9).
Asian’Andriamanitra. Mampirediredy tokoa ny fahoriana raha vakiana izao tenin’i Joba izao (12-24). Eto dia toa mahatsapa i Joba fa: tsy hoe tsy miraharaha azy fotsiny Andriamanitra (izany koa no heverin’ny olona maro amin’izao andro izao) fa tena tonga fahavalony mihitsy Izy ary miady aminy. Mahatsiaro anefa izy hoe, tsy hivoaka mpandresy amin’izany mihitsy anie izaho e! Ny isam-batan’olona koa anefa dia afaka manana fifandraisana manokana Aminy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Izy mantsy no nanao ny fampihavanana tamintsika sy ny Ray. Tsy hoe Andriamanitra lavitra antsika fotsiny Izy fa tena Ray mihitsy ho antsika. Noho Jesosy Kristy nalatsa-drà sy novonoina dia nitony ny fahatezeran’Andriamanitra (13) noho ny fahotantsika.
Fanontaniana: Moa ve vita fihavanana amin’Andriamanitra ianao? Mitaona ny olona mba hihavana amin’Andriamanitra ve ianao?